Twin Seoul sigaba Inqanaba lesithandathu njenge 'ekuvukeni' yi
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Twin Seoul sigaba Inqanaba lesithandathu njenge 'ekuvukeni' yi
Xa ukwahlukana kwinqanaba yesine into yokwenene [3500 yen yovavanyo lwentsebenzo Free] ukuya oosiyazi of ukufumana indlela
umphefumlo oliwele kweqonga, kwakhona Nijonge endizimbeleyo phakathi yesihlanu nqanaba ke mgama, yaba ixesha enjongo Awakening kokomoya ukuphucula ezabo. Ixesha ukuxolela bonke abantu emhlabeni kuphela iqela, ngokugalela uthando olungenamiqathango, kuya kwenzeka livakale komphefumlo.
ngokusebenzisa le nkqubo, iya kuba nako bangadlulela kwinqanaba yesithandathu, nto leyo kwisigaba esilandelayo. Kweli nqanaba, wayishiya ngokupheleleyo ego ukuba ubanjwe kude kube ngoku, sinako kuvuka ukuya eliphezulu kwinqanaba njengomntu.
hayi wena, cinga ngento enokwenziwa ukuze umntu ngaphandle kokucela ukubuya, uze wamkele inkangeleko yam inyaniso, umzimba nengqondo eze ngokupheleleyo amandla ngokungenisa ngenyhek ngokomoya uya kubona. Ukuba kunokwenzeka ukuba uqhubeke
kwesi sigaba, wayigqiba ixesha ukungcola, eziye banyamezela elide, uyakwazi ukuqhubeka ukuya kwinqanaba lokugqibela.
eli nqanaba ukuba uthando
? olungenamiqathango xa Wamkelekile ngokupheleleyo ukuvuseleleka agalelwa bonke abantu, ulilahle kude yonke ego eye sasilinywa amava kunye nolwazi elidlulileyo, umphefumlo nomoya siphaphile siza kuqhubeka ngendlela. Ngoko, ayisendim lula ukucinga izinto ingeniso kunye nelahleko, kuba kunjalo ugalele uthando olungenamiqathango kubantu bonke.
kukho, akukho ego, ezifana ngayo ukucinga kakuhle ukuze abantu komphefumlo abangamawele kunye ngumsindo. Ngokuba zonke iziganeko ezenzeka yabo, eyamkelekileyo iye yaba kangangoko kunokwenzeka, noxolelo, kwaye unokuba uthando.
Oku, niqonde ukuba uThixo isiganeko kuphoselwa kukhokelela ukwamkela yonke into.
? yonke bamkele cala le
amkele yonke into, kwaye ngoko ashiywe kuphela uhlobo siphendu sibe siphuma kuThixo, ukuze babeke ngokwabo Izinto kabi Rusubete, ziya kwamkelwa ngo cala. Kubuhlungu ukuba ayifihlakele kude kube ngoku, ubuso eludongeni ngaphandle bakuphepha, wena akusekho woyika ukuvumela ngokwakho ingqiqo kaThixo kunye nendalo.
Yiloo nto, uthando olungenamiqathango ukuba afune ukubuyela liya kuba nako ukudubula. Uthando ukuba cala ibe ngokupheleleyo yinto, ukuba uyakwazi phakamisa ngokwakho phezulu apho, uza kukwazi ukuba livakale komphefumlo amawele ungekhoyo kungekudala. Xa
ekhululwe ukuzigwagwisa ukuba
kweli nqanaba kuba lula, kwakunzima kude kube ngoku nyamalala, uya kuziva ngathi owanelisayo babekhululekile ukuzigwagwisa. Emva koko, uyaqaphela ukuba shwaka tsala kwi kude kube ngoku owoyamaniswe kamnandi. Le ukuvuseleleka yokomoya ngengqiqo bokwenene ilizwi.
ukuphucula ezabo, ukuba kunokwenzeka ukuba singaneli ukuya kutsho uyazi lothando olungenamiqathango, Ukuhlangana komphefumlo amawele olinde ngoko nangoko apho.